Showing posts with label ရသစာစုများ. Show all posts
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, January 26, 2011 Wednesday, January 26, 2011 Labels: ရသစာစုများ
ကျွန်မဟာ ဘာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ မယ်မယ်ရရ စိတ်ကူး ရည်ရွယ်ချက် မရှိပါဘဲနဲ့ အသီးအရွက်တွေ၊ စားသောက်ကုန်တွေ ရောင်းတဲ့ စတိုးဆိုင်လေးထဲကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်.. တစ်ခုခု ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်စားချင်တဲ့ စိတ်လည်း ကျွန်မမှာ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ဒီဆိုင်လေးထဲကို ၀င်ရောက်လာခဲ့မိပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆိုင်လေးထဲမှာ ကျွန်မအတွက် အမှတ်ရစရာတွေ ရှိနေလို့ပါဘဲ… ဒီဆိုင်လေးကို ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မခင်ပွန်းတို့ အမြဲတမ်း အတူလာလေ့ ရှိပြီး အသီးအရွက်တွေ၊ စားသောက်ကုန်တွေ ၀ယ်လေ့ရှိကြတယ်လေ… ခုတော့ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းပါ။ သူ မပါတော့ပါဘူး.. မပါတော့ဘူးဆိုတာထက် သူဟာ ကျွန်မနဲ့အတူ ဘယ်ကိုမှလည်း မလိုက်ပါနိုင်တော့ပါဘူး.. လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလလောက်ကဘဲ.. သူ… ကျွန်မခင်ပွန်း ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ အသက် ၃၇နှစ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ လူ့လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာဖို့ စောလွန်းပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကျွန်မကိုထားရစ်ခဲ့ပြီး ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ ခုတော့ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ခြင်းဆိုတဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လေးလံစွာ သယ်ပိုးထားရသူတစ်ယောက် ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆိုင်လေးထဲ ကျွန်မတို့၂ယောက် အတူတူ ဈေးလာဝယ်တိုင်း ကျွန်မခင်ပွန်းဟာ ကျွန်မအတွက် အ၀ါရောင် နှင်းဆီပန်းလေး သုံးပွင့်ကို အမြဲတမ်း ၀ယ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်.. ပန်းတွေထဲမှာ ကျွန်မက နှင်းဆီပန်းကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သလို အ၀ါရောင်နှင်းဆီကို အခြားအရောင်တွေထက်လည်း အနှစ်ခြိုက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကို သူလည်း သိပါတယ်. ဒါကြောင့်လည်း သူဟာ ကျွန်မအတွက် အ၀ါရောင် နှင်းဆီလေးကို အမြဲ ၀ယ်ပေးတတ်တာပါ။ ခုတော့ နှင်းဆီအ၀ါရောင်လေး ၀ယ်ပေးမဲ့ သူက ကျွန်မအနားမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ စတိုးဆိုင်လေးထဲ လှည့်ပတ်ကြည့်နေရင်း ပန်းတွေရောင်းတဲ့ နေရာကိုရောက်တော့ လှပလန်းဆန်းနေတဲ့ အ၀ါရောင် နှင်းဆီတွေကို ငေးခနဲကြည့်မိရင်း ကျွန်မ ရင်ဘတ် တစ်နေရာက စူးစူးနင့်နင့် နာကျင်လို့ လာပါတော့တယ်.. အတိတ်ရဲ့ အရိပ်တွေက ကျွန်မကို အသစ်ပြန်ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ခုခုဝယ်ပြီးတော့ ဆိုင်ထဲက အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတော့တယ်။
အသားတွေ ရောင်းတဲ့အတန်းဘက်ကို လျှောက်လာမိတော့ သူကြိုက်တတ်တဲ့ ၀က်ပေါင်ခြောက်တွေကို မြင်လိုက်စဉ်မှာ သူ့ကို ပိုပြီး သတိရသွားစေခဲ့ပါတယ်. ဘာလို့ဆို ကျွန်မခင်ပွန်းက ၀က်ပေါင်ခြောက် သိပ်ကြိုက်တတ်သူပါ။ ခုနေ သူ့ကို ၀က်ပေါင်ခြောက်လေး ကျွေးချင်ပေမဲ့ သူ မစားနိုင်တော့ပါဘူး။ အသားတွေ စီထားတဲ့ အတန်းရှေ့မှာ ခဏရပ်နေရင်း ငေးကြည့်မိနေတုန်းမှာ အသားဖြူဖြူ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ် အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဟာ အမဲသားကောင်းကောင်း တစ်ထုပ်ကို ရွေးယူလိုက်ပြီး သူ့တွန်းလာတဲ့ ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းလေးရဲ့ ခြင်းထဲကို တွန့်ဆုတ်ဆုတ်နဲ့ ထည့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းတောင် မလှမ်းရသေးခင်မှာဘဲ အမဲသားထုပ်ကို ခြင်းထဲက ပြန်ထုတ်ပြီး မူလနေရာမှာ ထားလိုက်ပြန်ပါတယ်.. ပြီးတော့တစ်ခါ ပြန်ကောက်ကိုင်ပြန်ပါတယ်.. သူမဟာ အမဲသားကို ၀ယ်ချင်ပုံလည်း ရပါတယ်. ပြီးတော့ ချီတုံချတုံလည်း ဖြစ်နေပုံရပါတယ်..
ထို့နောက်တော့ သူ့ကို ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မကို မြင်တွေ့သွားပြီး ရှက်ပြုံးလေးတစ်ခု ပြုံးလိုက်ရင်းက “ကျွန်မ ယောက်ျားက အမဲသားသိပ်ကြိုက်တာ၊ သူ့ကို ၀ယ်ကျွေးချင်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီအသားတွေက သိပ်ဈေးကြီးတာဘဲ.. ” လို့ ခပ်နွမ်းနွမ်း အပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်တော့ ကျွန်မရင်ထဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားမိပါတယ်. ပြီးတော့ သူ့ချထားတဲ့ အမဲသားထုပ်ကို ငဲ့ကြည့်လိုက်ပြီး ခြောက်သွေ့ ကွဲအက်နေတဲ့အသံနဲ့ “ ရှင့်ယောက်ျား အတွက် သူတကယ် ကြိုက်တာလေးတွေကို ၀ယ်ပေးဖို့ဆိုရင် နှမြောမနေပါနဲ့ရှင်။ ၀ယ်ကျွေးလိုက်ပါနော်။ ကျွန်မ ယောက်ျားကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ခုချိန်မှာ သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ ၀က်ပေါင်ခြောက်ကို ကျွန်မ ၀ယ်ကျွေးချင်ပေမဲ့ ကျွေးလို့ မရတော့ပါဘူး။ ရှင့်မှာ သူကြိုက်တာလေးတွေ ကျွေးခွင့် ရနေသေးတာကိုက သိပ်ကံကောင်းပါတယ်.. ကျွေးခွင့် မရနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေရောက်မှ နောင်တရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ခုလို ကျွေးခွင့်ရချိန်မှာ နှမြောတွန့်ဆုတ်မနေဘဲ ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ ကျွေးလိုက်ပါနော်။ ” လို့ ပြောလိုက်မိပါတယ်.။
အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ သူမဟာ စိတ်လှုပ်ရှား တွေဝေသွားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကျွန်မကို ငေးခနဲ လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး ချက်ခြင်းဘဲ အပြုံးလေးတစ်ပွင့်နဲ့ ခေါင်းလေးကို တစ်ဆတ်ဆတ်ငြိမ့်လို့ အမဲသားထုပ်ကို ပြန်ကောက်ယူလိုက်ကာ သူ့ခြင်းလေးထဲ ထည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ လုံးဝ တွန့်ဆုတ်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်မကို ကျေးဇူးတင် စကားလေးဆိုရင်း သူ့ရဲ့ ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းလေးကို တွန်းပြီး အသားတွေ ထားတဲ့ စင်နားကနေ ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်.. ကျွန်မလည်း ကိုယ့်တွန်းလှည်းလေးကို အသာတွန်းလို့ နွားနို့တွေ ရောင်းတဲ့ စင်ဘက် လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်. နွားနို့တွေ တင်ထားတဲ့ အတန်းမှာတော့ ကျွန်မလိုချင်တဲ့ တံဆိပ်နဲ့ နွားနို့ ၂ပုလင်းကို ခြင်းထဲထည့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ဒီဆိုင်ကို ရောက်တိုင်း ကျွန်မအမြဲစားနေကျ ရေခဲမုန့် တစ်ဗူး သွားဝယ်ပါတယ်။
ရေခဲမုန့်ဗူးလေးဝယ်ပြီး တွန်းလှည်းလေးကို ခပ်ဖြေးဖြေးတွန်းလို့ Casher ကောင်တာနား ရောက်ချိန်မှာတော့ အစောက အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံနဲ့ မိန်းခလေး ကျွန်မရှေ့ကို ရောက်လာပါတယ်.. သူမရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာတော့ အင်မတန်မှ လှပတဲ့ အပြုံးလေးကို ဆင်မြန်းထားပြီး လက်ထဲမှာတော့ ပန်းစည်းလိုလို ရှည်မျှောမျှော အထုပ်ကလေး တစ်ထုပ်ကို ကိုင်ထားပါတယ်.. ကျွန်မအနားရောက်တော့ မိန်းမချောလေးက ဒါဟာ “အစ်မအတွက်လက်ဆောင်ပါ” လို့ပြောပြီး သူမရဲ့လက်ထဲက အထုပ်လေးကို ကျွန်မကို လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်… မိန်းခလေး ကျွန်မကိုပေးတဲ့ လက်ဆောင်လေးကို ဖြေလိုက်တော့ အစိမ်းရောင် ပါကင်စက္ကူနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ရိုးတံရှည်ရှည် အ၀ါရောင် နှင်းဆီပန်းတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ထူးဆန်းစွာ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် ကျွန်မရဲ့ ရင်ထဲမှာ ခံစားချက်တစ်မျိုးနဲ့ အံ့သြလို့ နေမိပါတယ်.. ကျွန်မ နှင်းဆီပန်းကြိုက်တာ သူ ဘယ်လိုသိပါလိမ့်။ ပြီးတော့ ကျွန်မခင်ပွန်း အမြဲပေးနေကျအတိုင်း နှင်းဆီတွေက ဘာလို့များ အ၀ါရောင် ဖြစ်နေပြီး တိုက်ဆိုင်လှစွာဘဲ ၃ပွင့်တိတိ ဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်။
သူမက “အစ်မဟာ ကျွန်မကို အသိတရားလေးတစ်ခု ပေးလိုက်တာပါဘဲ။ အသက်ရှင်သန်ချိန်လေးမှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂရုစိုက်ရမယ်.. ကြင်နာရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မ နားလည်သွားပါတယ်.. အစ်မ ပြောသလိုဘဲ ကျွန်မတို့ ချစ်တဲ့သူတွေ၊ မိသားစုတွေ ကိုယ့်ဘေးနား ရှိနေချိန်မှာ ဂရုတစိုက် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာ ရှိသင့်ကြပြီး သူတို့တွေ မရှိတော့ချိန်ကျရင် ဂရုစိုက်ချင်ရင်တောင် မစိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ အချိန်မှီ သိလိုက်ရလို့ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်မိတာပါ။ ကျွန်မရဲ့ လက်ဆောင်လေးကို အစ်မ သဘောကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..” လို့ ကျွန်မကိုပြောပြီး ကျွန်မအနားကနေ ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်.. ကျွန်မ စကားတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောလိုက်နိုင်ဘဲ ဆွံ့အပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်.. ဘာကြောင့်များ ဒီလောက် တိုက်ဆိုင်နေရတာပါလဲ။ လက်ထဲက အ၀ါရောင် နှင်းဆီလေးသုံးပွင့်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်မိတော့ ကျွန်မခင်ပွန်း သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အ၀ါရောင် နှင်းဆီတွေလိုဘဲ လှလို့စွင့်လို့၊ ရနံ့လေးကလည်း သင်းသင်းကို မွှေးလို့ပါဘဲ။ ကျွန်မတို့ အတူတူရှိခဲ့တဲ့ အချိန်တွေဟာ ကျွန်မအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အမှတ်ရစရာ၊ ပျော်စရာအချိန်တွေ ဖြစ်သလို သူစားချင်တာ၊ သူဖြစ်ချင်တာတွေ ကျွန်မ အမြဲ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သလို သူကလည်း ကျွန်မအတွက် ကျွန်မ နှစ်သက်တတ်တာလေးတွေ၊ မြတ်နိုးတတ်တာလေးတွေကို အလိုက်သတိနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ခဲ့ပါတယ်..
ခုလည်း ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ မြတ်နိုးတဲ့ နှင်းဆီပွင့်လေး သုံးပွင့်က တိုက်ဆိုင်စွာ ကျွန်မလက်ထဲ ရောက်လို့လာခဲ့ပြီ။ ဒါဟာ သူပို့ပေးလိုက်တဲ့ နှင်းဆီလေးတွေ မဟုတ်ဘူးလုိ့ ဘယ်သူက ပြောနိုင်မလဲနော်။ အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံနဲ့ အမျိုးသမီးလေးဟာလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့ ထူးဆန်းမှုလေးတစ်ခုဘဲ မဟုတ်ပါလား။သေချာပါတယ်။ ကျွန်မဘေးမှာ ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းဟာ ရှိနေတုန်းဘဲ၊ ကျွန်မကို အမှတ်ရနေတုန်းဘဲ ထင်ပါရဲ့။ ဒီတစ်သက်မှာ အခုလို နှင်းဆီပန်း အ၀ါလေးသုံးပွင့်ကို ကျွန်မကိုပေးမဲ့သူ ဘယ်သူမှ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ နှင်းဆီပန်းတွေ ချစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူကမှ အမှတ်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်နေခဲ့မိတာ။ ခုတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်မ လက်ခံရလိုက်မိတဲ့ နှင်းဆီပန်းလေးတွေက ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ အသိပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။ ကျွန်မရဲ့မျက်ဝန်းက မျက်ရည်စက်လေး တစ်ချို့ကတော့ အ၀ါရောင် နှင်းဆီပွင့်လေးပေါ်ကို စွန်းထင်းလို့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အတူရှိစဉ်က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြင်ကြင်နာနာရှိခဲ့တဲ့ အချိန်များစွာရှိခဲ့တာကြောင့် သူမရှိတော့ပေမဲ့ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ သူဟာ အမှတ်ရစရာ များစွာနဲ့ အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေမှာပါလေ။
The Angel of Roses ( Unknown Author) ကို နှစ်သက်စွာ ဘာသာပြန်ပါသည်။